एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन दौडमा डा. केशब धेरै अगाडि छेउ मै छैनन प्रतिस्पर्धी - Everest Dainik - News from Nepal
एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन दौडमा डा. केशब धेरै अगाडि छेउ मै छैनन प्रतिस्पर्धी
टेक्सस (अमेरिका), भदौ १९ । एक वर्षदेखि प्रतीक्षारत गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन यसै हप्ताको ५ र ६ तारिख तय भएसँगै अमेरिकी डायस्पोरामा नेतृत्व पदका लागि जोड–घटाउ शुरु भएको छ ।
यसअगाडि अध्यक्ष पदमा पाँच प्रत्यासीले नेतृत्वमा आकांक्षा देखाए पनि गौरीराज जोशीको उम्मेदवारी मनोनयनलाई निर्वाचन समितिले प्रक्रिया नपुगेको कारणसहित अयोग्य ठहराएको थियो । त्यही अयोग्यताको असन्तुष्टिलाई लिएर जोशी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि अनिश्चित बनेको राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन पुनः जोशीले डा. केशव पौडेललाई एक कार्यकाल थप काम गर्न दिने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएपछि मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वर्तमान कार्यसमितिकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय रविना थापा र राम सी पोखरेल लागिपरेका छन् । १४ हजार सदस्य रहेको गैरआवासीय नेपाली संघकोे नयाँ नेतृत्वमा ४ आकांक्षीमध्ये वर्तमान अध्यक्ष डा. केशव पौडेल नै सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् न्यूयोर्कस्थित शिक्षा पेशामा आबद्ध दिलिप ओझा ।
ओझा भन्छन्– ‘दुई वर्षअगाडि भारी मतले निर्वाचित डा. पौडेलविरुद्ध पराजितहरुले हारेकै हप्तादेखि मुद्दा हालेर दुःख दिए । मलाई लाग्छ डा. पौडेलले उनको क्षमताअनुसार काम गर्नै पाएका छैनन् । उनलाई काम गर्न दिइएकै छैन । त्यसैले एक पटक पुनः उनलाई अमेरिकाबासी नेपालीले विवेक पु¥याएरै जिताउनुपर्छ ।’
लभलेस हेल्थ सिस्टम नामक अस्पतालका सिनियर मेडिकल डाइरेक्टर, स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्क अपस्टेटका पूर्व प्राध्यापक, हस्पिटल मेडिसिन सोसाइटी न्यू मेक्सिकोका पूर्व अध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको उत्कृष्ट मेडिकल अफिसर अवार्डबाट सन् २००३ मा सम्मानित डा. पौडेलका वर्तमान प्रतिस्पर्धीहरु सामान्य रुपमा पनि अमेरिकी नेपालीले एनआरएन अध्यक्षका लागि स्वीकार गर्ने खालको नहुनुले पनि यस पटकको निर्वाचनमा डा. पौडेल निकै अगाडि भएको बताउनेहरुको कमी छैन । अध्यक्ष पदका अन्य प्रत्यासीहरुमा कृष्ण पोखरेल न्यूयोर्क लाइफ इन्स्सुरेन्सका इन्सुरेन्स एजेन्ट हुन् भने रविना थापा बाल्टिमोरस्थित लुम्बिनी रेष्टुरेन्टकी सञ्चालिका हुन् । त्यसैगरी राम सी पोखरेल टेक्ससस्थित किराना व्यापारी हुन् ।
डा. पौडेल निकै अगाडि
नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. केशव पौडेलप्रति विश्वभरि क्रियाशील ८० प्रतिशत कांग्रेस निकट एनआरएन अभियन्ताहरुको सहानुभूति छ । डा. पौडेललाई अबका एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षका प्रत्यासी भवन भट्टले महासचिव पदमा अफर गरेका थिए भने उनीसँगै भिड्ने तयारी गरेका कुमार पन्तले सचिव पदमा अफर गरेका थिए । तर, डा. पौडेलले माथि जाने उच्च महत्वाकांक्षा देखाएनन् ।
गत कार्यकालमा विपक्षीहरुले निर्वाचन जितेकै दिनदेखि मुद्दामामिला गरेर अनावश्यक विवाद गरेर काम गर्नै नदिएपछि थप एक कार्यकाल अमेरिकाभित्रै काम गर्ने उनको उद्देश्यलाई सकारात्मक रुपमा लिने ठूलो जमात अमेरिकामा उनको पछाडि छ । उनलाई बोलेपछि पूरा गरेरै छाड्ने व्यक्तिका रुपमा अमेरिकामा चिन्ने गरिन्छ भने विपत्ति परेका बेला स्टेथेस्कोप बोकेर बिरामी जाँच्न मैदानमा उत्रने व्यक्ति हुन् डा. पौडेल भन्छन् क्यालिफोर्नियाका जीवन पन्त । उनी भन्छन्– ‘डा. पौडेलले नेपालको भूकम्पमा देखाएको भूमिकाले म नतमस्तक छु । अहिलेका अन्य प्रतिस्पर्धीहरुभन्दा डा. पौडेलले धेरै अगाडिको दूरी तय गरिसकेका छन् । डा. केशव पौडेलले सबैभन्दा महत्वपूर्ण दृष्टि टिम निर्माणमा देखाएका छन् । मधेस र मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुमन साह लिएका छन् । महासचिवमा जनजाति प्रतिनिधित्व हुने गरी बाबुराम लामालाई लिएका छन् ।
डा. केशव पौडेलको अर्को जित्ने आधार भनेको उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न कम्मर कसेर लागेका गौरीराज जोशीको समर्थनले उनलाई थप मजबुत बनाएको छ । नेपालमा व्यापारिक साझेदारीदेखि वृद्धाश्रम निर्माण र चेपाङलाई सहयोगमा समेत सहयत्रा गर्दै आएका गौरीराज जोशी र डा. पौडेलको मित्रता अत्यन्त गहिरो छ । त्यही कारणले जोशीले डा. पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने बरु सहकार्य गर्दै सफलता हासिल गर्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएको कुरा यी दुईको सहमति भएको बैठकमा बसेका एक सामाजिक कार्यकर्ताले बताए ।
एकातर्फ प्रतिस्पर्धीहरु निकै कमजोर हुनु र अर्कोतर्फ डा. पौडेल व्यावसायिक, राजनीतिक र सामाजिकरुपमा अब्बल हुनुले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मको कार्यकालका लागि अमेरिकी एनआरएनमा पुनः डा. पौडेल लगभग सुरक्षित देखिएका हुन् ।
वकिल जिसीको हर्कत
गतवर्ष एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्मा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर भारी मतले पराजय भोगेका न्यूयोर्कका वकिल खगेन्द्र जिसीलाई पुनः उपाध्यक्ष पदको भोक जागेपछि उनले योग्यता नै नपुगेका सोझा स्वभावका व्यवसायी गौरीराज जोशीलाई अनावश्यक उचाले । आफ्नो अनुकूलको अध्यक्ष जिताउँदा आफू अनुकूलका प्रतिनिधि अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनमा पु¥याउँदा आफूलाई उपाध्यक्ष जित्न सजिलो हुने जिसीको सपनाका कारण फुल्दै गरेको एनआरएन कचहरीसम्म पुग्यो । निर्वाचन नै तीन महिना ढिला सम्पन्न हुने भयो । कांग्रेस नेता महेन्द्रध्वज जिसीका भाइ खगेन्द्र जिसी आफ्नो फाइदाका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । अहिलेका अध्यक्ष पदका बलिया प्रत्यासी डा. केशव पौडेल नेविसंघकै पूर्व नेता भए पनि जिसीले आफू अनुकूल नहुने भएपछि गौरीराज जोशीलाई डा. पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए । तर, गौरीराज जोशी एक कार्यकाल काम नगरेका कारण विधानअनुसार उनी अध्यक्ष पदका लागि योग्य भएका थिएनन् ।
उता, जिसीसँगसँगै कांग्रेस प्रवास संगठन जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष गोरखबहादुर विष्ट पनि डा. पौडेलविरुद्ध व्यक्तिगत रिस साँधेर पछि लाग्दै गए । गौरीराज जोशीलाई डा. पौडेलविरुद्ध भड्काउँदै गए । गौरीराज जोशीलाई अनावश्यक उचालेर जिसी, विष्ट र एमालेका केही कार्यकर्ता मिलेर अदालतमा मुद्दा दर्तासमेत गराइयो । तर, व्यापारमा राम्रो सफलता हासिल गरेका सोझो स्वभावका जोशीले यी सबैलाई पिठ्युँ फर्काएर मुद्दा फिर्ता लिए र एक पटक डा. पौडेललाई नै अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा पुगे ।
जोशीले नाम फिर्ता लिएपछि एकाएक तिलमिलाएका खगेन्द्र जिसी अर्का अवसरवादी स्वभावका कृष्ण पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउनुप¥यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न व्यस्त छन् । जिसी अध्यक्षका कृष्ण पोखरेल र अन्य पदमा एमालेका कार्यकर्ताको फोटो राखेर प्रचारप्रसार गर्न थालेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा जिसीविरुद्ध व्यापक विरोध भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कृपामा परराष्ट्रको अवैतनिक एनआरएनएन सल्लाहकारको नियुक्ति लिएका जिसीले खुल्लम्खुल्ला सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी प्रचार गर्न थालेपछि विरोध भएको हो ।